SRRC = Soomaalida Rumaysatay Ra’yiga Cadowga
Dugsiga Hoose Dhexe markaan dhiganayey haddaan maqlo saarkii Carays Ciise Allaha u naxariistee oo ahaa waraaboow maalin wacan aad baan ula dhici jiray micnihiisuna waa iga dhaadhici jiray. Markii isagoo Xabashida ka wada ay lahayd aan “federal” noqo oo aan isku biirno wuxuu yiri:
Wedaygey baa tahee
Aan is weheshanee
Wanyahow ha i goyn wadnaha.
Wankii oo uu Soomaaliya ka wado wuxuu yiri:
Ma wiil aad waalidkiyo
Wedaynimo kaama rabo
Warkiina waa kooban yahay
Waddankaa anaa iska leh
Aan kala waydaarane
Waraaboow maalin wacan
Carays Allaha u naxariistee wuu yaqaan inaan waraabe rabbaayad gelin.
Markii Eldoret la joogay waxaan soo saaray maqaal aan ugu magac daray Sheekhu Najdi shirka halaga saaro oo aan Zenawi ka waday. Qab-qablayaasha ilaa tooda laga carqaldaynayo hadalka ma qaataan. Maxaan Zenawi shaydaan ugu sheegay?
Akhristayaal Diinta Islaamka ayaa sheegtay in shaydaanku inta uu iskaga kaa dhigo saaxiib uu markaad ugu baahi badantahay kaaga baxaa. Haddaad akhrisid aayadda 48-aad ee Suurat Al-Anfaal wuxuu shaydaanku Quraysh ku leeyahay anaa idin la jira oo cid idin ka rayn karta ma leh laakiin markii goobtii la yimid ayuu cagaha wax ka deyey! Hadda Zenawi wuxuu u sheegay dadka Somaliland ee goosashada raba inuu hiil iyo hooba la garab-taaganyahay ilaa ay Soomaaliya ka go’aan. Somaliland nabad soo dabbaale, doorashooyin qabte, madaxweyne Daahir ka dhigte markii ugu dambaysay ee ay dunida ka doonayeen in la aqoonsado ayey saaxiibkoodii qaaliga ahaa (Zenawi) ka bilaabeen. Muxuu yiri? Wixii shaydaanku Quraysh ku yiri. Zenawi wuxuu yiri meesha Maraykan iyo midowga Yurub baa maraya waxba idiin ma qabankaro waxaan danaynayaa Nabadda Soomaalida iyo Soomaali weyn.
Carabtu waxay tiraahdaa “cinda Shadaa’idi yucrafu ikhwaanu” oo ah marka dhibaatadu jirto ayaa la gartaa qofkii walaal ah.
SRRC = Soomaalida Rumaystay Ra’yiga Cadowga hadda oo ay dhibanyihiin waxay walaal ka dhigteen Zenawi waxayna dhagaha ka furaysteen saarkii Carays Ciise Allaha unaxariistee. SRRC waxay ka baqeen inaysan “dhaxalkii Soomaaliya dhadhamin” makaasay qaylo afka ku shubteen iyagoo leh “hanqaraarac lug uma dhutiyo” micnaha ninkii shirka ka baxa isagay jirtaa! Haddii ninka shirka ka baxa aan shuqul lagu lahayn may joogaan meelihii ay ka yimaadaan oo ay dadka ku dhici jireen? Gabyaa Soomaaliyeed baa laga hayaa isagoo haweenay ka sheeganaya:
Iimaanku qayb buu galaa waa mid laga qaaday
Qalalaasahay jeceshahoo nabaddu waa u qaaxo
Qaanuunku meeshuu ku jiro qoobka dhigi mayso.
Horta dharbaaxo xun baa qabsatay oo qorshahoodii ahaa inaan shirka la hakkin oo aan cid loo istaajin waa lagu diiday. Waxay la yimaadeen caqligii carruurta. Shirka waddamo ayaa hantidoodii gashay. Ma waxay mooddeen in uu Zenawi xukumo Yurub iyo Maraykan? Haddee la yaab ma leh waatii Idaajaa nooga warramayey Ibnu Khaltuum markuu lahaa qof walba cida madaxa uga istaagta waa ka dambeeyaa. SRRC waxay indhaha fureen oo ay dagaalka soo galeen Zenawi oo carrada hor booda.
Qab-qablayaashii ka baxay SRRC oo magacooda loo soo gaabin karo SRRC = Soomaalidii Radisay Ra’yiga C/hi markay toodi socon wayday waxay la soo shirtageen qodobo lagu dhagi karo oo ay ka mid tahay:
1. Dastuurka oo dacay la gashay
2. Somaliland hala keeno
3. Qab-qablayaasha hala heshiishiiyo
4. Hogaanka shirka Soomaalida haloo dhiibo
Somaliland ma Moorgan bay meel la fariisan? Madaxweynaha Somaliland iyo Moorgan isku macalin bay ahaayeen mabaadii isku mid ahna waa la haayeen. Teeda kale marba hadday Xabashi isku fiicanyihiin waxkasta waa dhici karaan.
Suugaantan mala hilmaamay?
Nin abeeso koriyoow adigaa u aayine
Axdi malaha Xabashidu lagu aaminaaye
Ninkii dilay walaalkeen
Inana waa noo danleeyahay
SRRC-da iyo taageerayaashoodu waxay dhaheen Xabashidu taad taqaaneen maaha! Koow waa tee? Waxaa la dhahaa:
“man caasha calaa shay’in maata calayhi” waa meeshii Barkhad Cas ka lahaa waxaad wadhafto oon wad kaa helin ka waantoobay waa war loo noqon ama sida Soomaalidu u tiraahdo waxaad baratay waa baaskaa. Miyeydaan u jeedin in macalinkii bilaabay in Itoobiya loo irkado uu wali maanta hoosta uga jiro. Miyeeydaan u jeedin in ay da’i ka dabo timid isagoon mowqifkiisii bedelin iyadoo ay Amxaaradii wax badan iska bedeleen.
Cadowgaaga cadowgiis ma saaxiibkaa baa? Maahan siyaasad muslim. Cadowgaaga cadowgiis waa wuxuu kuu yahay! Waxaan ka wadaa haddaad dad muslim ah is haysataan dadka cadowga u ah muslimkaas dheh Xabashida sinaba saaxiib kuuguma ahan ee adna waa cadowgaa. Caqliga Soomaalida markii la eego Somaliland iyo Puntland waa isu cadow haddii mid ka mid ah uu Zenawi soo weeraro, Zenawi ma wuxuu noqon saaxiibkood? Haddii aad SRRC ka mid tahay haa. Dib ugu noqo qisadii Kacab Binuu Maalik. Yaan loo fahmin in Nabiga Nabad gelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo Kacab cadow isu ahaayeen ee waxaan uga jeedaa in uu Kacab warqad ka helay boqorkii Ruum isagoo leh nin caan ah baa tahaye noo imoow oo muslimiinta ka soo tag markii uu ka haray dagaalkii Tabuuk oo la qaadacay laakiin Kacab waa diiday. Sidii kale Mucaawiye wuxuu warqad ka helay Ruum oo oranaysa waxaan ku siinaynaa taageero aad uga hortagtid Cali Binu Abii Dhaalib Ilaahay Raali ha ka noqdee laakiin Mucaawiyey Ilaahay Raali haka noqdee wuu diiday.
Talo: hadday noqoto in shirkaas dib loogu soo noqdo waa in dastuurka, hogaanka iyo qaabka shirka wax laga bedelaa. Haddii kale inta wax la iska saxiixdo ayaa hadhow waxaad halaagaysaan dadkiina iyo dalkiina. Deg-deg wax ma taro. Waqtigiina qaata. Sidii horay loo sheegay waxay ku fiicnayn in qab-qablayaasha oo dhan la xirxiro oo maxkamad la horkeeno.
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 17, 2003